Iindaba -Imidlalo yeBhodi yokwenyani yeeGeeks Sele zenze iMidlalo ngeNdleko yazo
Umdlalo weBhodi yokwenyani iiGeeks Sele zenze iMidlalo ngeNdleko yazo
Masibuyele ku-Epreli 2020. Ngelo xesha, ubhubhani wayesandula ukuqala phesheya, kwaye abantu babanjiswa emakhaya bengenanto yokwenza. Kwaye abadlali betafile abaphumli. Njengoko sonke sisazi, iitafile zabadlala iidubhu ezinkulu ezenza iimephu zazo zomdlalo, iibhokisi zokugcina kunye neetafile zomdlalo ezinikezelweyo.
Kwaye kukho ezinye zeebhodi zemidlalo yebhodi, ezibonakala ngathi zikhetha ilifa lakudala-imidlalo yakudala.
Ilifa lezembali lityebile kwaye liqaqambile, kwaye yenye yeebhodi zebhodi yokuqala ezafunyanwa- Umdlalo wasebukhosini eUreifakiwe kwimyuziyam yase-Bhritane e-UK. Kodwa imvelaphi yale nto yenkcubeko ayizukanga kakhulu: yaphangwa ngabembi bezinto zakudala baseBritane kumangcwaba asebukhosini eIraq.
Ngokungafaniyo neendlela zobugcisa zamandulo ezinjengokupeyinta kunye nemibongo, imidlalo yebhodi ibonisa ngokuthe ngqo inani labadlali, uhlobo lomdlalo, indawo yomdlali kulo mdlalo, njl., Enika abaphulaphuli indawo yokucinga. Omnye wabanxibelelanisi,Vila, Uchithe phantse unyaka nangaphezulu kwe-30,000 yuan (RMB) eyedwa ukwenza umdlalo obizwa ngokuba Umdlalo wasebukhosini eUre.
Kutheni usenza wedwa?
“Xa ubhubhane waqala, ndandisekhaya ndizama ukufunda ulwimi － lwakwa-Israeli. Xa i-YouTube indithumelele ividiyo－Irving uLeonard Finkel, umphandi kwiMyuziyam yaseBritani, wamenywa UThomas Scott, umdlalo wokubamba umdlalo, ukudlala umdlalo webhodi endala: Umdlalo wasebukhosini eUre. Ndifunde imigaqo kwayeOwenKwiphepha lomdlalo, kwaye kwakulula ukuwufunda, kwaye wawunembali eninzi emva kwawo, kwaye kufanelekile ukufundwa. ”
Kodwa, xa efuna ukuthenga umdlalo oza kudlala kwiAmazon naseEtsy, into ayifumeneyo iyamdanisa. Umgangatho unjalo nje, kwaye awukhangeki kakuhle. Ngela xesha,Viera ecinga ukuba lo mdlalo kufuneka ugqitywe kwinyanga, kodwa kummangalisa kukuba akukho nzima ukwenza kuphela, kodwa kuthatha ixesha elide…
Ukuze wenze umdlalo ngokugqibeleleyo, Virawagqiba kwelokuba azifundise ukuchwela nemifanekiso eqingqiweyo. Wajoyina amaqela ahlukeneyo okuchwela kunye noncedo, emva koko waqala ukuziqhelanisa kakhulu. Ukusuka ekukrwebeni ngamatye ukuya ekubumbeni ukuya ekutyongeni ... Iziphawuli ezinje ngee-dices kunye nezicu zechess kufuneka zikrolwe, zicolwe, zicocwe, kwaye zimiliswe.
Ukuba ufuna ukubuyisela eyona nkangeleko yebhodi, la matye awancamatheliswa ngeglu, kodwa nge-asphalt. Umva webhokisi yomdlalo kufuneka uncanyathiselwe ngamaqokobhe akhethekileyo. Wayesokola noku-odola izinto ekrwada kwi-intanethi.
Virayaqala le projekthi inamabhongo. Ukopha bekuyinto eqhelekileyo ukuze kususwe kwaye kupolishwe amatye. Ukongeza ekucoceni amatye, wachitha imali eninzi kwiincwadi zembali kwaye wafunda ngeerokhethi zebhodi yokujonga, iimilo zamehlo, amachaphaza, njl.
Nini Viera ukubeka kwakhona Umdlalo wasebukhosini eUrekwi-Intanethi, amajelo eendaba afumana ingxelo eninzi. Abantu bayavuma ukuba esi sisisombululo esifanelekileyo. Ngoku uthumela i-imeyileOwenkwiMyuziyam yaseBritane ngethemba lokufumana ukuqonda kwimbali esemva komdlalo. “Ndifuna ukufikelela esiphelweni sayo. Lilifa elingenakuthelekiswa nanto. ”
Umdlalo wasebukhosini eUreyafunyanwa ngo-2600-2400 BC. Umdlalo wamadoda amabini. Icala ngalinye linamaqhekeza asi-7. Umdlali wokuqala uqengqa idayisi kwaye uye kwinqanaba lokuqala. Ibhodi inemiqolo emithathu, ekhohlo nasekunene ngamacala omabini ezenzo zomdlali, embindini “yibala lomlo” lomdlali, ukuba isiqwenga sifikelele nje kwelinye icala lesiqwenga, isiqwenga singatyiwa.
Kukho iindawo ezintlanu ezinethamsanqa kwiimbombo zone naphakathi ebhodini, apho kunikezelwa umqulu wesibini wedayisi, uvumela umdlali ukuba abeke isiqwenga esitsha kumdlalo okanye aqhubele phambili isiqwenga esidala. Indawo ye-C yebhodi, i-rose position, ine- "protection" kunye nethuba lokwenza enye intshukumo. Kwangokunjalo, iziqwenga ezininzi zinokubekwa ebhodini ukwenza lula kubadlali ukuba bacwangcise amaqhinga abo.
Wonke umntu unomdla malunga nenkcitho yakhe. Kutheni uchitha ngaphezulu kwe-30,000RMB ukwenza umdlalo onje? Umkhuluwa uphendule wathi imali ayingomba ophambili. “Ukuba uyibeka qho ngenyanga, kundithathe iinyanga ezilishumi ukwenza lo mdlalo, oyi-3,000RMB ngenyanga. Ukuba akunjalo ngenxa yobhubhane, le ibiya kuba yinkcitho yam yenyanga yokonwabisa. Ayisiyongxaki ke leyo. ”
“Nangona kusekho ukuphucuka okuninzi ekufuneka kwenziwe… Kodwa ukubuyiselwa kwezinto kuye kwathatha kakhulu ubomi bam. Ngoku lixesha lokuba uyeke ukuzama ukugqibelela. Ngapha koko, ukungafezeki kukugqibelela. ”
Ngokudibeneyo, inetizen enye enegama EWarwick Ipeyintiwe a Umnyhadala weGooseifakiwe kwiMyuziyam yaseBritane. Wayiprinta kwiphepha elingqingqwa le-watercolor ngokweUmnyhadala weGoose iboniswe kwiMyuziyam yaseBritane, ipeyintwe ngesandla kwaye ixhaswe ngelinen, ukuze i-chessboard isongwe. Faka umbala kwiziqwenga zechess uze wenze idayisi ngethambo ngesandla.
Ukuphefumlelwa kwakhe kwavela kwingxoxo: umyili UPell Nielsenwenze imidlalo yamandulo yebhodi ukusukela ngo-2014. Ukuze afumane abanye abadlali, waqala ingxoxo kwi-BGG kwaye wayenethemba lokwabelana nabanye ngezixhobo zakhe. Yahlukile kwinkangeleko yokubuyiselwa,PelaInguqulelo ihlawule kakhulu umdlalo kunye nomsebenzi.
Pelauthe: “Isizathu sokuba ndikuthande ukushicilela (okanye ukubuyisela) le midlalo kukuba kuyanceda ukukhusela le midlalo. Eminye imidlalo ishiywe yodwa kwaye igcinwe kwimyuziyam ongafane uyifumane. Kodwa ngelishwa, uhlahlo-lwabiwo mali lilinganiselwe. Ezinye zeencwadi endizaziyo ngemidlalo zibiza kakhulu kum. ”
Ngokuzenzekelayo, e-China, abanye abantu benza ukubuyiselwa kwezinto zakudala zomdlalo webhodi. Ngo-2019, iqela loyiloUHezhong Shandian uchithe iminyaka emine ebuyisela I-Boqi emithandathu, Waqokelela ngaphezulu kwamaxwebhu angama-20, kwaye ekugqibeleni wabuyisela ama-70% emithetho yoqobo.
Makhe siqwalasele iMyuziyam yaseBritane. Ngapha koko, iMyuziyam yase-Bhritane ibandakanya uninzi lweedayisi kunye neempawu zebhodi yomdlalo eyafunyanwa kwinkulungwane edlulileyo okanye nakwi-BC.
Kukho iziqwenga zeendlovu zechess ukusuka ngo-3050 BC:
Iidayisi ezahlukeneyo zamaRoma:
Imbali yemidlalo yetafile inde kwaye intle. KwiNtshona yamandulo, imidlalo yebhodi yayihlangene noothixo kwakudala. Ukusukela ngoko, imidlalo ayisiyiyo nje into elula, kodwa ikwanokubaluleka kwezenkolo.
Iflegi yaseKing Uri, efihlwe kwiMyuziyam yaseBritane eLondon, yavunjululwa kwingcwaba lobukumkani laseUre. Umfanekiso wenqwelo yokulwa kwiflegi yomkhosi ungqina ukuba abantu babesele beyilele "ivili" ngelo xesha。 Lo mfanekiso wobugcisa ubotshwe ngoonokrwece, i-lapis lazuli kunye nelitye lekalika kwiibhodi zomthi, umphambili kunye nomqolo ngokwahlukeneyo zibonisa imifanekiso emangazayo yemfazwe noxolo, kwaye yamkelwe njengenye yezona zinto zimele inkcubeko yempucuko yaseLianghe.
Kwi Umdlalo wasebukhosini eUre, sijonge emehlweni kwibhodi yechess, asinakuze siyazi intsingiselo yayo, kodwa kufuneka sicace gca ukuba imbali yomdlalo yimbali yoluntu, kwaye ezi tafile zabathanda ukuhamba zihlawula abantu abadala ngendlela yakudala .
Ikhadi lemikhono, Idayisi yesiNtu, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Amalaphu Umdlalo weBhodi, Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni,